Waftigii M/weynaha Puntland oo wali ku sugan Qordho, kulamana la yeeshay bulshada, kormeerana sameeyey maanta. – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2012 12:21 g 0
Qardho, Nov 25 – Waxaa wali magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ku sugan M/weynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sh Maxmed ‘Faroole’ iyo waftigii uu hoggaaminayey oo iskugu dhafnaa hay’adaha kala duwan ee maamulka Puntland.
Mudane, Faroole ayaa intii ku sugnaa magaalada Qardho kulamo ka duwan la yeeshay qaybaha maaul ee gobolkaasi iyo wax-ku-oolka bulshada, iyadoo la isla soo qaatay arrimo badan oo la xiriira amniga, hormarka iyo horukaca dimuqraadiyadeed ee Puntland ay haaminayso hadda.
M/weynaha, ayaa maanta sameeyey kormeero hawleed isagoo daahfuray xabsi weyn oo laga yagleelay Qardho, kaasoo dhismihiisu wakhti badan qaatay, iskuna jira dhawr qaybood.
Xarig ka jiridda xabsigaasi cusub, waxaa ku weheliyey xubno kala duwan oo ka tirsan golihiisa xukuumadda, baarlamaanka iyoo mas’uuliyiin ka tirsan maamul degmo iyo kan gobolka ee halkaasi ka jira.
Munaasabaddaasi m/weynuhu xarigga uga jarayey dhismaha xabsiga, waxaa uu ka jeediyey khubdad uu uga warramayey mugga xabsiga iyo marxaladihii dhismihiisu soo maray, iyagoo sheegay in loo qaabeeyey qaadista tiro dad ah oo ku 300 oo ruux.
Xabsiga, ayaa sida la sheegay loogu talo galay in lagu xirxiro dadka gala dambiyada abaabulan iyo burcadda-badeedda.